Maxaa laga fahmay khudbaddii uu madaxweyne Farmaajo u jeediyey BF? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa laga fahmay khudbaddii uu madaxweyne Farmaajo u jeediyey BF?
Maxaa laga fahmay khudbaddii uu madaxweyne Farmaajo u jeediyey BF?
Muqdisho (Caasimada Online) – Marka la eego Khudbadii shalay ee Madaxweyne Farmaajo waxaa kuu Iftiimaya in uu taagan yahay madaxweynuhu xaalad quus ah, oo aysan caddeyn sida looga bixi karo, waxaana laga dareemayaa inuu ku daalay xaaladaha jahwareeerka leh ee ku qotanta doorashooyinka Soomaaliya.
Madaxweynuhu wuxuu ka baaqsaday hadallo suuqa ugu jiray oo ku saabsanaa inuu daneeynayo muddo kordhin, sababta uu golaha u codsadeyna ay tahay ajando waqti dheereysi ah.
Qodobkaan waxaa la aaminsan yahay in Madaxweyne Farmaajo isaga daayay cadaadiska beesha caalamka darteed.